भियाग्रा कसरी काम गर्छ? Common सामान्य प्रश्नहरूको उत्तर - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समुदाय, कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार प्रेस घरपालुवा जनावर कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> औषधि जानकारी >> भियाग्रा कसरी काम गर्छ?
भियाग्रा कसरी काम गर्छ?
पहिलो पटक भियाग्रा लिँदा प्राय: प्रश्नहरूको शृ .्खला हुन्छ। भियाग्रा कसरी काम गर्छ? म के आशा गर्न सक्छु? भियाग्रा कति लामो हुन्छ? कस्तो प्रकारको साइड इफेक्ट सामान्य छन्? कुन साइड इफेक्टहरूलाई मेडिकल ध्यान आवश्यक छ? यहाँ साना निलो गोलीको बारेमा केहि बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूका उत्तरहरू छन्।
भियग्रा भनेको के हो?
भियाग्रा (सिल्डेनाफिल) उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधी हो इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) पुरुषहरूमा। भियाग्रा ईडी को उपचार गर्न सक्दैन वा यौन इच्छा बढाउन सक्दैन। यसको सट्टामा यसले मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ र रगतको प्रवाह बढाउँदछ।
तपाइँ एकै दिन मा oxycodone र hydrocodone लिन सक्नुहुन्छ
फाइजर द्वारा निर्मित, भियाग्रा जेनेरिक औषधि सिल्डेनाफिल साइट्रेटको एक ब्रान्ड नाम हो। अमेरिकी फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) भियग्रालाई यौन नपुंसकताको लागि अनुमोदन गरेको छ। सिल्डेनाफिलले पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचापको उपचार पनि गर्न सक्छ। भियाग्रा एक भासोडिलेटर हो जुन केवल पर्चेको द्वारा उपलब्ध हुन्छ।
तपाईं अमेरिकामा काउन्टरमा भियाग्रा खरीद गर्न सक्नुहुन्न।
भियाग्रा (भियाग्राको बारेमा अधिक) लि blood्गमा रगत प्रवाह बढाउन मद्दत गर्न रगत नलीको भित्ताहरूमा स्नायु मांसपेशीहरू द्वारा काम गर्दछ, यसलाई प्राप्त गर्न र यसलाई राम्रो बनाउनको लागि सजिलो बनाउँदछ। भियाग्रा मात्र प्रभावकारी हुन्छ यदि यौन उत्तेजना हुन्छ, जस्तै कि संभोगको समयमा हुने। जब उत्तेजना पहिलो हुन्छ, भायाग्राले लि to्गमा रक्त प्रवाह बढाउन मद्दत गर्दछ र त्यसपछि निर्माणलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
यस अनुसार बोस्टन विश्वविद्यालय यौन चिकित्सा स्कूल , इरेक्टाइल डिसफंक्शनले -०-70० वर्षको उमेरका men२% पुरुषलाई असर गर्छ, जसमध्ये धेरै उनीहरूको लक्षणहरूसँग मद्दत गर्न ईरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधीहरूतर्फ फर्कन्छन्। भियाग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रगको एक प्रकार हो जसलाई एक फास्फोडीस्टेरेज in इनहिबिटर भनिन्छ। PDE5 अवरोधकर्ताहरूले एक विशेष इन्जाइम राख्छन् जसलाई phosphodyterase टाइप -5 (PDE5) चाँडै अभिनय गर्नबाट रोक्दछ। यदि PDE5 ढिलो काम गर्दछ भने, तब मांसपेशीहरूलाई आराम गर्ने र रक्त वाहिकाहरू फराकिलो बनाउन जिम्मेवार पदार्थले यसको काम गर्न सक्दछ।
भियाग्रा केही सर्तहरूको साथ मानिसका लागि त्यति प्रभावकारी हुँदैन। भियाग्राको पूरा फाइदा तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ, थकित, वा मादक पदार्थ हुनुहुन्छ। रक्सीले वाइग्राको साइड इफेक्ट बिगार्न सक्छ र सम्भावित इरेक्टाइल डिसफंक्शनलाई अझ खराब बनाउन सक्छ।
तपाईंले सेक्स गर्नु भन्दा एक घण्टा अगाडि खाली पेट भियाग्रा लिनु पर्छ। यो to० देखि minutes० मिनेट भित्र काम गर्न थाल्छ, तर एउटा निर्माणमा यौन उत्तेजना आवश्यक पर्दछ।
केही बिरामीहरूले भियग्राको प्रभाव २० देखि taking० मिनेट भित्रमा औषधि लिने अनुभव गर्छन्, एम्बर विलियम्स, फर्म.डी, का कम्पाउन्ड फार्मासिस्टले भने। परिवार फार्मेसी सारासोटा मा। यद्यपि, यदि खुराक उच्च-फ्याट खानाको साथ लिइएको छ भने, चरम प्रतिक्रिया 60० मिनेट सम्म ढिलाइ हुन सक्छ। धेरै बिरामीहरूमा, भियाग्रा को प्रभाव दुई घण्टा सम्म रहनेछ। दुई घण्टा वा कमको अवधिले उपयुक्त खुराक लिइएको संकेत गर्दछ। यदि अवधि चार घण्टा भन्दा बढी छ भने, टिश्युहरूमा हानिकारक प्रभावहरू जोगिन चिकित्सा उपचार तुरून्त खोज्नु पर्छ।
भियाग्रामा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
भियाग्रा मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
भियाग्रा कति लामो हुन्छ?
भियाग्रा पछिल्लो समयको मात्रा धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। खुराक, उमेर, र समग्र स्वास्थ्य केवल केहि कारकहरू हुन् जसले भियाग्रा कसरी राम्रोसँग काम गर्छ भनेर प्रभाव पार्न सक्छ र कसैको लागि रहन्छ। भियाग्राको सानो डोज (वृद्ध वयस्कहरूको लागि सिफारिस गरिएको) मतलब यो कि ड्रग लामो समय सम्म चल्दैन।
भियाग्राको औसत डोज २-1-११०० मिलिग्राम हो, to० देखि minutes० मिनेटसम्म लिन्छ, वा यौन गतिविधि अघि चार घण्टा सम्म। 65 65 बर्ष भन्दा माथिका वयस्कहरूको लागि सिफारिश गरिएको खुराक २ mg ​​मिलीग्राम हो। धेरै वयस्कहरूसँग ढिलो मेटाबोलिजम हुन्छ, जसको अर्थ हो कि सानो खुराक लिने साना व्यक्तिको तुलनामा कम खुराक उनीहरूको लागि लामो समय सम्म रहन्छ।
भियाग्रा लिनुहोस् पहिले यौन गतिविधि, यो भियाग्रा को रक्तप्रवाहमा लिन को लागी समय लाग्छ। यस्तो सम्भावना छैन कि भियग्राले तपाईंलाई यौन सम्बन्धमा लामो समय सम्म मद्दत गर्दछ। यद्यपि, केहि पुरुषहरू - उनीहरूको मेटाबोलिज्ममा निर्भर रहँदै, धेरै इरेक्शन अनुभव गर्न सक्दछन् जब भियाग्रा तिनीहरूको प्रणालीमा छन्। एकचोटि यसले काम सुरू गरेपछि, भियाग्रा सामान्यतया चार वा पाँच घण्टासम्म रहन्छ। यदि तपाईंले यस निर्माणको अनुभव गर्नुभयो जुन यो (प्रियापिज्म) भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ वा पीडादायी छ भने, यो चिकित्सा सल्लाह लिन समय हुन सक्छ।
भ्याग्राले तपाईंलाई orgasm पछि चाँडो पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्दैन। रिकभरी समय (रेफ्रेक्टरी अवधि भनिन्छ) प्रत्येक व्यक्तिको लागि फरक हुन्छ। भियाग्रा लिने बखत रक्सीको सेवन गर्दा लि to्गमा रगत प्रवाह घटाएर औषधी कम प्रभावकारी हुन सक्छ।
केही मेडिकल सर्तहरू भएका व्यक्तिहरूका लागि, भियाग्रा लामो लामो लामो हुन सक्दैन। चिन्ता, उदासीनता, वा घबराहटको भावना अक्सर भियाग्रा लामो लामो वा प्रभावशाली हुन को कारण छैन। मुटुको समस्या, हृदय रोग, मधुमेह, वा अन्य स्नायु प्रणाली समस्याहरूले पनि भियग्रा लामो लामो नहुनुको कारण हुन सक्छ।
केहि औषधीहरूले भियाग्रासँग नकरात्मक अन्तरक्रिया गर्दछ र यसको प्रभावकारितामा हस्तक्षेप गर्दछ। रक्तचाप कम गर्ने ड्रग्सले भियाग्रासँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ खतरनाक रूपमा कम रक्तचापको कारण। नायट्रेटहरू समावेश भएको कुनै पनि औषधिको साथ भियग्रा नराख्नुहोस्, जसमा सडक औषधिहरू जस्ता पिप्पर्स भनिन्छ अमिल नाइट्रेट र ब्युटाइल नाइट्रेट समावेश छ। एन्टिफंगल र एन्टिवाइरल औषधिहरूले रक्तप्रवाहमा भियग्राको मात्रा बढाउन सक्छ, जसले विषाक्तता निम्त्याउन सक्छ। तपाईको हेल्थकेयर प्रदायकसँग कुरा गर्नु नै भयाग्राले कुनै औषधि अन्तर्क्रियाको कारण गराउने उत्तम उपाय हो।
एकलकेयर पर्चा छुट
तपाइँलाई भियाग्रा चाहिएको छ भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ?
भियाग्रा पाउने बारेमा जब डाक्टरसँग कुरा गर्ने कुरा जान्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। इरेक्शन प्राप्त गर्न समस्या भएकोले यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले भियग्रा लिनु पर्छ। भियाग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचार गर्दैन। त्यसकारण, नपुंसकताका सम्भावित अन्तर्निहित कारणहरू हेर्नु आवश्यक छ।
केही पुरुषहरू मनोवैज्ञानिक कारणहरूको लागि निर्माण प्राप्त गर्न वा यसलाई कायम राख्न सक्षम नहुन सक्छन्। यदि तपाईंसँग आफ्नो पार्टनरसँग यौन सम्बन्ध राख्न इच्छा छैन भने, यसले तपाईंको ED निम्त्याउन सक्छ। एक सल्लाहकारसँग व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहोस् वा अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक मुद्दाहरूको समाधानको लागि तपाईंको यौन साथीसँग एक चिकित्सक हेर्नुहोस्।
भियग्रा जस्ता इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधी सेवन गरेर तपाईंलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर जान्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु हो। तिनीहरूले शारीरिक परीक्षण गर्न सक्छन् र ईडीको कारण हुन सक्ने मेडिकल सर्तहरू बाहिर इन्कार गर्न सक्दछन्। यी स्वास्थ्य अवस्था मध्ये केही मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल, वा उच्च रक्तचाप समावेश छ।
यदि तपाईंसँग अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक वा स्वास्थ्य समस्या छैन र सेक्सको लागि पर्याप्त गाह्रो इरेक्शन प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्न समस्या भइरहेको छ भने, तपाईंले भियाग्रा लिएर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ।
एक पटक तपाईले स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग कुरा गरिसकेपछि, उनले वा भियग्राले तपाईंलाई भियग्राको लागि प्रिस्क्रिप्शन दिन सक्छन्।
यदि तपाईं आफ्नो चिकित्सकमा पुग्न सक्नुहुन्न भने, त्यहाँ अन्य विकल्पहरू उपलब्ध छन्। सिल्डेनाफिल मान्यताप्राप्त टेलिमेडिसिन साइटहरू मार्फत अनलाइन उपलब्ध छन् जुन तपाईंलाई इजाजतपत्र प्राप्त डाक्टरहरूसँग जोड्दछ, डा विलियम्स भन्छन्। यी डाक्टरहरूले एक अनलाइन भ्रमण गर्नेछ र सिल्डेनाफिल तपाईंको लागि एक विकल्प हो कि भनेर निर्धारण गर्न तपाईंको हालको स्वास्थ्य स्थिति समीक्षा गर्नेछ। यदि तपाईं राम्रो उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने, तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन तपाईंलाई सहजै पठाइन्छ।
तर तपाईले किन्नु भएको ठाउँमा सावधानी अपनाउनुहोस्: भियग्रा अनलाइन उपलब्ध भएता पनि, यो विश्वमा सबैभन्दा नक्कली औषधी हो। केहि नकली गोली प्रिन्टर मसी, एन्टिबायोटिक र एम्फेटॅमिनहरू पनि समावेश गर्दछ। एक मान्य प्रिस्क्रिप्शन र Viagra खरीद गर्नुहोस् अमेरिका आधारित फार्मेसी बाट प्रमाणित इन्टर्नेट फार्मेसी अभ्यास साइटहरु द्वारा मान्यता प्राप्त नकली Viagra बाट बच्न।
त्यहाँ भियग्रा बाहेक अन्य औषधिहरू छन् जुन स्त्रावपन रोगको उपचार गर्दछन्। यदि तपाइँले आफूले चाहेको नतिजा प्राप्त गर्नुहुन्न भने, अन्य उपचार विकल्पहरूको बारेमा तपाइँको स्वास्थ्यसेवा प्रदायकसँग कुरा गर्ने समय आउन सक्दछ।
Cialis (tadalafil) र Levitra (vardenafil) ED को उपचार पनि गर्दछ। सक्रिय घटक जुन जेनेरिक भियाग्रा, सिल्डेनाफिल साइट्रेटमा छ, पनि औषधीमा छ Revatio । रेवाटिओ (सिल्डेनाफिल) ले पल्मोनरी धमनी उच्च रक्तचाप (पीएएच) को उपचार गर्दछ, यस्तो अवस्था जहाँ फोक्सोमा रक्तचाप धेरै बढी हुन्छ।
सम्बन्धित: सियालिस विवरणहरू Tadalafil विवरणहरू Levitra विवरण Venderafil विवरण
भियाग्रा को साइड इफेक्ट के हो?
कुनै पनि औषधीको रूपमा, त्यहाँ साइड इफेक्टको लागि सम्भाव्यता सधैं हुन्छ। साइड इफेक्टको निम्नलिखित सूची विस्तृत छैन। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् यदि निर्धारित गर्नुहोस् कि भियाग्रा तपाईंको लागि सही औषधि हो। यहाँ केहि सामान्य भियाग्रा साइड इफेक्टहरूको सूची छ जुन तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ:
नाक वाहक वा भरी नाक
यद्यपि यो दुर्लभ हो, भियाग्राले कहिलेकाँही गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईं निम्न प्रभावहरू अनुभव गर्नुहुन्छ भने, भियाग्रा लिन रोक्नुहोस् र तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
दृष्टि वा सुनुवाईको अचानक नुकसान
एक निर्माण जुन दर्दनाक हो र चार घण्टा भन्दा बढिमा रहन्छ
यौन गतिविधि को शुरुआत मा Viagra पछि छाती दुखाई
चरम अवस्थाहरूमा, भियाग्राले हृदयको अटैकको कारणहरू पहिले मुटुको अवस्थाका साथ भएका छन्।
भियाग्रा लिँदा अत्यधिक मात्रामा रक्सी पिउँदा माथि उल्लेखित कुनै पनि साइड इफेक्टको अनुभव हुने जोखिममा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सक्छ। भियाग्रा साइड इफेक्टको विस्तृत सूचीको लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् र भियग्रा लिनु तपाईंको लागि सही छ कि छैन भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।
के तपाइँ अफिबको लागि रगत पातलो लिन पर्छ?
यो पिउन पछि एडविल लिन सुरक्षित छ
तपाइँ गर्भवती हुँदा एलर्जी को लागी के लिन सक्नुहुन्छ
त्यहाँ cialis को लागी एक सामान्य बराबर छ
दुखाइ को लागी tylenol र ibuprofen बीच वैकल्पिक
naproxen सोडियम एक विरोधी भड़काऊ हो